Wiil uu dhalay M/weyne African ah oo gawaarida dunida ugu qaalisan xaraash ahaan loogu soo… – Hagaag.com
Wiil uu dhalay M/weyne African ah oo gawaarida dunida ugu qaalisan xaraash ahaan loogu soo…
25 ka mid ah gawaarida dunida ugu qaalisan islamarkaana uu leeyahay wiil uu dhalay madaxweynaha dalka yar ee Afrika ku yaal ee Equatorial Guinea ayaa xaraash ahaan waxaa loogu soo bandhigay magaalada Geneva ee dalka Switzerland.
Gawaarida lasoo bandhigay ayaa waxaa ka mid ahaa gawaarida dunida ugu qaalisan ee kala ah Ferrari, Lamborghini, Bentley iyo Bugatti Veyron, intooda badana waa la iibsaday.
Ninka gawaaridan iska leh oo lagu magacaabo Teodorin Obiang Nguema (51-jir) ayaa waxaa dhalay madaxweynaha dalka Equatorial Guinea Obiang Nguema, kaas oo xukunka dalkaasi ku qabsaday afgambi sannadki 1979-kii.
Dadka dalkaasi ayaa la tacaalaya nolol-maalmeedka caadiga ah xilli wiilka madaxweynaha uu qaaradda Yurub uu ku tumanayo lacagaha canshuuraha ee shacabka dalkaasi laga qaado.
Ninkan gawaaridiisa la xaraashay ayaa sidoo kale waxa uu saaxiib la yahay gabar danish ah oo qaaday koobka qururxda dalka Denmark.